Nanao Slave ve ny Fivarotan-dry Lewis sy Clark?
York, mpikambana ao amin'ny Enslaved an'ny Expedition Lewis sy Clark
Ny Corps de Discovery dia nanana mpikambana mendrika izay tsy maimaim-poana
Mpikambana iray tao amin'ny Expedition Lewis sy Clark dia tsy mpiasa an-tsitrapo, ary araka ny lalàna tamin'izany fotoana izany, izy dia tompon 'ny mpikambana iray hafa tao amin'ilay fiarandalamby. Izy no York, andevo afrikanina-amerikana izay an'i William Clark , ilay mpiara-mitantana an'arivony.
Teraka tany Virginia tamin'ny 1770 tany ho any i York, toa an'ireo andevo izay nanana ny fianakavian'i William Clark. York sy Clark dia mitovy taona mitovy amin'izany, ary toa toa efa nifankahalala izy ireo hatramin 'ny fahazazana.
Tao amin'ny fiarahamonina virijiny izay nihalehibe i Clark, dia tsy ho hafahafa ny ankizilahy iray raha te hanompo zazalahy kely. Ary toa hita fa nahatanteraka an'io andraikitra io i York, ary nijanona ho mpanompolahy Clark hatrany am-pahalehibeny. Ohatra hafa amin'izany toe-javatra izany ny an'i Thomas Jefferson , izay nanana mpanompo velona nandritra ny androm-piainany sy "mpanompom-behivavy" nantsoina hoe Jupiter.
Raha nanana ny fianakavian'i Clark i York, ary taty aoriana i Clark, dia toa nanambady izy ary nanana fianakaviana talohan'ny 1804, rehefa voatery nandao an'i Virginie tamin'ny Lewis sy Clark Expedition.
Lehilahy mahay mandeha handositra
Nandritra ny dingam-pandeha i York, dia nahavita andraikitra maromaro, ary hita fa tsy maintsy nanana fahaiza-manao be dia be izy ho toy ny mpanamboatra bakalorea. Nanazava tamin'i Charles Floyd izy, ilay hany mpikambana tao amin'ny Corps of Discovery izay maty teo amin'ny seranana. Toa toa an'i York angamba no nahalalany ny fanafody fanafody.
Ny lehilahy sasany teo amin'ilay sambo dia voatendry ho mpihaza, namono biby ho an'ny hafa mba hihinana, ary indraindray dia niasa toy ny mpihaza i York, toy ny ombidia.
Noho izany, mazava ho azy fa nomena mozika izy, na dia niverina tany Virginia aza ny andevo dia tsy navela hitondra fitaovam-piadiana.
Ao amin'ny gazety mivoaka an-gazety dia misy fanamarihana an'i York izay mahatalanjona amin'ny Amerikana Indianina, izay toa tsy nahita an'i Amerika Afrikana mihitsy taloha. Ny Indianina sasany dia handoko ny tenany ho mainty alohan'ny hidirany amin'ny ady, ary dia gaga tamin'ny olona iray mainty izy ireo tamin'ny nahaterahany.
Clark, tao amin'ny diariny, dia nandrakitra ny tranga nalain'ireo Indiana nanamarika an'i York, ary niezaka nanala ny hodiny mba hahitana raha voajanahary ny mainty.
Misy ihany koa ireo tranga hafa ao amin'ny gazetin'i York manatanteraka ny Indiana, amin'ny fotoana iray mitombo toy ny orsa. Nanaitra an'i York ny vahoaka Arikara ary nanondro azy ho "fitsaboana lehibe".
Fahafahana ho an'i York?
Rehefa tonga tany amin'ny morontsiraka andrefana ilay làlana, dia nanao ny fifidianana i Lewis sy Clark mba hanapa-kevitra ny amin'izay hijanonan'ny lehilahy amin'ny ririnina. Navelan'i hifidy niaraka tamin'ny olon-kafa rehetra i York, na dia efa nihemotra tany Virginia aza ny fiheverana ny fifidianana.
Ny tranga tamin'io fifidianana io dia notonin'ireo mpankafy an'i Lewis sy Clark, ary koa ny mpahay tantara sasany, ho porofon'ny toe-tsaina nasehony teo amin'ny famoahana. Rehefa tapitra anefa ilay dia, dia mbola andevo ihany i York. Nisy fomban-drazana nanamboatra fa i Clark dia nafahana tany York tamin'ny faran'ny fitsangatsanganana, saingy tsy marina izany.
Ny taratasy nosoratan'i Clark ho an'ny rahalahiny taorian'ny famandrihana dia mbola manondro an'i York ho andevo, ary toa tsy navotsotra nandritra ny taona maro izy. Ny zafikelin'i Clark, tao anaty fahatsiarovan-tena, dia nanamarika fa i Clark dia mpanompon'ny Clark tamin'ny 1819, 13 taona teo ho eo taorian'ny niverin-dàlana.
William Clark, tao amin'ny taratasiny, dia nitaraina momba ny fitondran'i York, ary toa hita fa mety hanasazy azy amin'ny alàlan'ny fanofana azy hanao asa an-terivozona. Indray andro, dia nieritreritra ny hivarotra an'i York ho andevo any amin'ny faritra avaratra atsimo kokoa izy, endrika mahery kokoa noho ny tany Kentucky na Virginia.
Ny mpahay tantara dia nanamarika fa tsy misy antontan-taratasy milaza fa efa nafahana i York. Clark, na izany aza, tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny mpanoratra Washington Irving tamin'ny taona 1832, dia nilaza fa nanafaka an'i York.
Tsy misy fitantarana mazava ny zava-nitranga tamin'i York. Ny kaonty sasany dia nahafaty azy talohan'ny 1830, fa misy ihany koa ny tantaran'olona mainty, hoy i York, miaina eo anivon'ireo Indiana tamin'ny taona 1830 tany ho any.
Rehefa nitanisa ireo mpandray anjara ireo mpizaha tany i Meriwether Lewis, dia nanoratra izy fa i York dia "lehilahy mainty hoditra tamin'ny anaran'i York, mpanompon'ny Capt.
Clark. "Ho an'ireo Virginians tamin'izany fotoana izany, ny" mpanompo "dia mety ho fialan-tsiny iombonana ho an'ny andevo.
Raha ny toeran'i York ho andevo no raisina ho an'ny mpandray anjara hafa ao amin'ny Lewis sy Clark Expedition, ny fiheverana an'i York dia niova nandritra ny taranaka ho avy.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, tamin'ny vanim-potoanan'ny taonjato faha-20 navoakan'i Lewis sy Clark, mpanoratra dia nanondro an'i York ho andevo, fa matetika nampiditra ny fitantarana tsy marina dia navotsotra ho valisoa noho ny asa mafy nataony nandritra ny famoahana azy.
Taorian'izay tamin'ny taonjato faha-20, noresahin'i York ho mariky ny avonavona mainty. Niorina ny sarivongan'i York, ary angamba izy no iray amin'ireo mpitsidika fanta-daza indrindra tao amin'ny Corps of Discovery, taorian'i Lewis, Clark, ary Sacagawea , ilay vehivavy Shoshone izay nanaraka ny dia.
6 Robber Barons Avy Amin'ny Lasa Amerikana
Iza moa i Henry Morton Stanley?
Sakafo Witch or Witch's Cake
Tena Lehilahy ve ny Dadatoa Sam
Ny mpanohana an'i Fort Detroit tamin'ny 1812 dia loza sy herisetra
Ny fifidianana tamin'ny taona 1840
Ady tany Frantsa sy Indiana: Famonoana an'i Fort William Henry
Ny Patch Pacific Garbage
Tendrombohitra Kosciuszko: Avo indrindra any Aostralia
Ahoana ny fomba hanaovana vatokiloko
Fanentanana ara-tsindrimandry sy fanentanana
SUNY Cortland GPA, SAT sy ACT Data
Mandeha misimisy kokoa amin'ny snowboarding jibs
Aries Man sy Leo Leo - fitiavana fitia
Torohevitra momba ny fandaharana fampianarana Baiboly tsara ho an'ny tanora kristianina
Zavamaniry mampihoron-koditra sy mampidi-doza any Amerika Avaratra - 1950 ka hatramin'izao
Ny karazana trozona nendasina
The Championship Players
Quick Primer ao amin'ny Fotopampianarana Fototra LDS (Mormon)
Taratasin'i Adama amin'ny alalan'i Efraima amin'ny toe-javatra manan-tantara
Vavaka ho an'i Masina Anne, Renin'i Maria
Open Water Swimming ho an'ny mpangataka
Ny IBM 701
Rama sy Sita
Valiny fohy momba ny asa amin'ny Burger King